कुन-कुन ठाउँका विद्यालय बन्द भए ? (विवरणसहित) - अन्नपूर्ण टाइम्स
कुन-कुन ठाउँका विद्यालय बन्द भए ? (विवरणसहित)
६ बैशाख २०७८ सोमबार १८:५७
काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद बैठकले शहरी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पठन–पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले देशैभरिका अन्य विद्यालयहरु भने बन्द गरेको छैन । मन्त्रिपरिषदबाट तोकिएका स्थानका शैक्षिक संस्थाहरुमात्रै बन्द हुनेछन्, बाँकी ठाउँका विद्यालयको पठन–पाठन सुचारु हुनेछ ।
यसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सबै महाहानरपालिका र नगरपालिकाका विद्यालयहरु बन्द हुनेछन् ।
यस्तै मेचीनगर, विर्तामोड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलिखेल, सिद्धार्थनगर, वीरेन्द्रनगर र भीमदत्तनगर नगरपालिकामा पनि शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी भौतिक रुपमा उपस्थित नभई वैकल्पिक विधिबाट शैक्षिक गतिविधि गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले तोकेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुबाहेक अन्य क्षेत्रमा शैक्षिक संस्थाहरुको पठन–पाठन भने सुचारु हुनेछ ।